Zimbabwe Cricket Team In Pakistan Tour – Zimbabwe Daily
Zimbabwe Cricket Team In Pakistan Tour
The Zimbabwe cricket team that travelled for a three match ODI series with Pakistan will spend six days in quarantine in Islamabad.
According to the Zimbabwean, the team will practice at the International Cricket Stadium in Rawalpindi during the quarantine.
A schedule has been issued in this regard, stating that the team will practice in the stadium daily from 10:30 a.m. to 2:00 p.m.
The three-match ODI series between Pakistan and Zimbabwe will start on October 30, the second ODI will be played on November 1 and the third ODI will be played on November 3 at the Rawalpindi Stadium.
The Zimbabwe cricket team will then reach Lahore on November 5.
The first T20 match will be played on November 7, the second on November 9 and the last T20 match on November 10.
The team will then return to Zimbabwe on November 12.
The Zimbabwe cricket team that travelled for a three match ODI series with Pakistan will spend six days in quarantine in Islamabad. According to the Zimbabwean, the team will practice at the International Cricket Stadium in Rawalpindi during the quarantine...